महन्त ठाकूर प्रधानमन्त्री बन्दै, ओलीसँग भयो यस्तो सहमति « Ok Janata Newsportal
महन्त ठाकूर प्रधानमन्त्री बन्दै, ओलीसँग भयो यस्तो सहमति
काठमाडौं । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकार निर्माणका लागि निर्णयक दल बनेको छ । कुनै समयमा तेस्रो दल बनेको जसपा अहिले सत्ता साझेदारीमा पहिलो पंक्तिमा उभिएको छ ।
सरकारमा जाने अवसर आएसँगै जसपा पार्टीभित्र घनिभूत छलफलमा जुटेको छ । जसपाका अध्यक्ष महत्न ठाकूर यतिबेला बढी सक्रिय भएका छन् । महन्तका लागि यति राम्रो समय अरु बेला आउला नआउला अहिले त प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था छ ।
शुक्रबार बसेको जसपा संसदीय दलको बैठकले उनलाई संसदीय दलको नेता छान्दैछ । यो समाचार तयार पार्दासम्म बैठक जारी छ । शुक्रबारमात्रै जसपालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको फोन सँगसँगै आएको थियो । जसपामा सरकारमा जानेबारे मत बाँझिएको छ ।
अध्यक्ष महन्त ठाकूरले ओली सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेका छन् भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई भने ओली सरकारमा नभइ कांग्रेससँग मिल्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रतिगमनलाई साथ दिएको भन्दै ओलीप्रति यादव र भट्टराई सकारात्मक छैनन् ।
यता, महन्तलाई प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरिसकेका छन् । महन्तले प्रधानमन्त्री ताक्ने देखेपछि ओलीले संसदीय दलको नेता बनिराख्न सुझाव दिएको स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्री ओली सत्ता छोड्नुपर्ने स्थिति आएमा पनि कांग्रेस र माओवादी बाहेक अरुलाई दिन चाहिरहेको स्रोत बताउँछ ।
अहिलेका पछिल्ला कदमले महन्त प्रधानमन्त्री बन्ने मार्ग प्रशस्त हुँदै गएको छ । डा. भट्टराई र अर्का अध्यक्ष यादवले असन्तुष्टि जनाएपनि सरकार बनाउन तत्कालीन राजपाका सांसदहरु नै काफी छन् ।